Budata Super PI APK maka Android
Budata Super PI
Free Budata maka Android (0.24 MB)
Budata Super PI,
Site na ngwa Super PI, ị nwere ike nwalee arụmọrụ na nkwụsi ike nke ngwaọrụ sistemụ arụmọrụ gam akporo gị nelu nọmba pi.
E mepụtala ọtụtụ ngwa iji nwalee ngwaike nke ngwaọrụ gam akporo. Anyị nwere ike ịsị na ngwa ndị a na-arụ ọrụ nụzọ nke ịchọpụta otú ngwaọrụ ahụ si dịgidere site nịkwanye ụfọdụ atụmatụ na njedebe. Super PI, otu nime ngwa dị otú ahụ, pụtara na ngwa nnwale ọdịnala ma na-enye anyị usoro nnwale dị iche kpamkpam.
Ị maara nọmba pi eji na mgbakọ na mwepụ, geometry ma ọ bụ physics. Ebe ntụpọ pimal na-aga nihu ruo mgbe ebighị ebi. Ngwa Super PI na-anwalekwa ọnụọgụ pi sitere na 8K, ya bụ, puku ọnụọgụ asatọ na nkeji 4M. Noge ule a, oge na-esote ọnụọgụ na-egosi ọsọ nke processor gị. Nikwu ya nụzọ ọzọ, obere oge ebe a, ngwa ngwa na-arụ ọrụ nhazi.
Iji nwalee ngwa a, ọ ga-amasị m ịkọrọ gị nha ndị m jiri ngwaọrụ nke m mee.
Ngwaọrụ: ASUS Zenfone 2 CPU Ugboro: 2333 MHz Ọnụ ọgụgụ nke nhazi: 4
Ọnụọgụ 8K> 0.041 sekọnd 16K nkeji> 0.090 sekọnd 32K digits> 0.221 sekọnd 128K digits> 1.147 sekọnd 512K digits> 6.687 sekọnd 1M digits> 12,750 sekọnd2M digits> 1 40.7 sekọnd.
Super PI Ụdịdị
Nha faịlụ: 0.24 MB
Mmepụta: Rhythm Software